अब सामाजिक सन्जालमा विज्ञापन गर्दा पनि सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने ! - Koshi Online
अब सामाजिक सन्जालमा विज्ञापन गर्दा पनि सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने !
सरकारले आफूखुसी कर लगाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला अब सामाजिक सन्जालमा विज्ञापन गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद् विकास तथा प्रविधि समितिले फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सन्जालमा हुने सबैखाले विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यससँगै अब सामाजिक सन्जालमा विज्ञापनका नाममा हुने ठूलो कारोबार पनि करको दायरामा आउने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सामाजिक सन्जालको विज्ञापनबापत् ठूलो रकम देशबाट बाहिर गइरहेको भन्दै त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले बढ्दो प्रविधिको विकास र त्यसमा हुने सबैखाले आर्थिक कारोबारलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सूचना र प्रविधिको भरपुर उपयोग हुने गरी नयाँ कानुन बनाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सदस्य जीपछिरिङ लामाले बताए ।
यससँगै अब सामाजिक सन्जाल फेसबुक, युट्युब, ट्वीटरमार्फत् विज्ञापन गर्दा पनि सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।